Boqolaal askari oo Al-Shabaab looga dilay Mudug | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya – Kooxda Al-Shabaab ayaa la kulantay guul-darrooyin is-xigxigay, kadib dagaallo xooggan oo ay kala kulmeen Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed [SNA] oo ay wehliyaan askarta Darwiish-ta Galmudug ee ku sugan gobolka Mudug, waxaana laga qabsaday aagag istiraatiiji ah.
Warbaahinta Dawladda Soomaaliya ayaa baahisay in ku dhawaad ​​200 oo ka tirsan kooxdaas ay ciidamada huwantu ku dileen meelo kala duwan oo ay ku jiraan Qaycad iyo Camaara tan iyo Sabtigii.
"In ka badan 200 oo askari oo ka tirsan maleeshiyada Al-Shabab ayaa la dilay, 16 saldhig ayaa la burburiyay, 4 magaalo iyo 8 tuulo ayaa la xoreeyay intii lagu jiray hawlgal ka dhan ah argagixisada oo socday saddex toddobaad," Ayay sheegtay warbaahinta dowladda.
Axmed Macalin Fiqi, Wasiirka Amniga Dowlad Goboleedka Galmudug oo ka mid ah saraakiisha hogaamineysa gulufka ka dhanka ah Al-Shabaab ayaa sheegay in ay Al-Shabaab ka qabsadeen 20 qori, rasaas iyo agab kale, kadib markii ay la wareegeen Camaara.
Gen Biixi, oo ah abaanduuliha ciidanka lugta ee Soomaaliya, iyo taliyihii hore ee booliiska Muqdisho, Saadaq Joon ayaa safka hore kaga jira dagaalka lagula jiro Al-shabaab ee ka socda gobolka isku xira koonfurta iyo waqooyiga ee Mudug.
Waxaa sii kordhaya howlgallada ka socda bartamaha Soomaaliya iyadoo ciidamada qalabka sida ay xoojiyeen gulufka ka dhanka ah Kooxda xiriirka la leh Al-Qaacida, oo lagaa gacan maroojiyay dhowr degaan, oo ay ku jiraan Bacaadweyne, Qaycad, Camaara, iyo deegaannada ku xeeran.